U-Air Astana usungula inkonzo yokuhlangana kunye nokubulisa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » U-Air Astana usungula inkonzo yokuhlangana kunye nokubulisa
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
U-Air Astana uza kwazisa ngenkonzo yokuhlangana kunye nokubulisa kwisikhululo seenqwelomoya iAlmaty kunye neNur-Sultan
Inkonzo entsha yenzelwe ukuhambisa uhambo lwabakhweli kwisikhululo seenqwelomoya
Ukuhamba kunye nokufika kokukhwela kuya kudibana nabakhweli kwindawo yokungena echongiweyo kunye neendawo zokuphuma ngaphakathi kwesiphelo
Uncedo luya kubonelelwa ngokuphathwa kwemithwalo, ukungena kunye nokubhoda
U-Air Astana uza kwazisa ngenkonzo yokuhlangana kunye nokubulisa abakhweli ekufikeni nasekumiseni kwabo kwizikhululo zeenqwelo moya eAlmaty naseNur-Sultan, kunye nenkonzo yokuhamba kwisikhululo seenqwelomoya iFrankfurt, ukuqala nge-9 ka-Epreli 2021.
Le nkonzo intsha yenzelwe ukuhambisa kakuhle Inzululwazi yasemoyeni uhambo lwabakhweli kwisikhululo seenqwelomoya, ngokungagungqi ukugqitywa kweenkqubo ezinyanzelekileyo ezifunekayo ngoku kuhambo lwamazwe aphesheya
E-Almaty nase-Nur-Sultan, ukuhamba kunye nokufika kokudibana kuya kudibana nabakhweli kwindawo yokungena echongiweyo kunye neendawo zokuphuma ngaphakathi kwesiphelo, ngoncedo olunikezelwe ukuphatha imithwalo, ukungena kunye nokubhoda. EFrankfurt, abakhweli abasebenzisa inkonzo yokuhamba baya kudibana nokukhapha emnyango wenqwelomoya okanye ukungena kwisiphelo sendlela, ngenkqubo yokukhawulezisa yokuhambisa inqwelomoya yokuqhagamshela abakhweli kunye nemithwalo yabo.
U-Air Astana, ophethe iflegi yaseKazakhstan, waqala ukusebenza ngoMeyi 2002 njengendibaniselwano phakathi kwengxowa-mali yobutyebi kazwelonke yaseKazakhstan, iSamruk Kazyna, kunye neNkqubo yeBAE, enezabelo ezingama-51% nama-49%.
I-Air Astana yinkonzo egcweleyo yamazwe aphesheya kunye neyasekhaya kunye nezahlulo zexabiso eliphantsi, iFlyArystan ikhula ngokukhawuleza kwintengiso yasekhaya. I-airline isebenza ngeenqwelo-moya ezingama-34 kubandakanya iBoeing 767, iAirbus A320 / A320neo, iAirbus A321 / A321neo / A321LR kunye ne-Embraer E190-E2.